Tamin’ny sabotsy teo ny fampiakarana fampanoavana teo Anosy ary miandry ny fitsarana azy eny am-ponja ilay raim-pianakaviana vita soratra sy niteraka roa, hoy ny fampitam-baovaon’ny borigadin’ny zandary ao Manjakandriana.
Araka ny fizahana ara-pahasalamana sy ara-pananahana notanterahin’ny mpitsabo eo amin’ny ivontoerana Vonjy ao amin’ny hopitaly Befelatanana, mitoe-jaza ilay mpianatry ny sekoly tsy miankina izay taona faha-9 eo am-piomanana hanala fanadinana BEPC. Ankoatra ny fahafaham-baraka, mipetraka ho olana hatrany ny fianaran’ity zazavavy ity, fa irony sekoly tsy milefitra amin’ny mpianatra bevohoka sy miteraka tsy manambady irony ny fitsipika ao aminy.
Raha tsiahivina, naharay fitoriana ny borigadin’ny zandary avy ao Manjakandriana ny 20 jona farany teo mikasika ny fanolanana. Nanatanteraka ny vela-pandrika ny zandary ary tafiditra tao anatin’ny haraton’ny mpitandro filaminana ka voasambotra ilay voapanga ka izao natolotra ny fitsarana izao ny raharaha. Tamin’ny fanadihadiana no nilazan’ilay voarohirohy ho mpanao an-keriny ara-nofo fa an-tsitrapo ny nanatanterarahan’izy ireo ny firaisana ara-nofo.
Araka ny voalazan’ny voapanga hatrany, efa ho roa volana no nifankatiavan’izy ireo, talohan’io firaisana ara-nofo io ka nolazainy fa tsy noterena ity lasibatra fa safidiny an-kalalahana izany. Na an-tsitrapo aza ny firaisana ara-nofo araka ny filazan’ity raim-pianakaviana 25 taona ity, rehefa tsy ampy taona ny zaza izay nahodinkodina dia mihatra hatrany ny lalàna.